24 hours ago 0 comments
Al-Shabaab Oo Askari American Ah Ku Dishay Weerar Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo shalay illaa iyo maanta gelinkii hore ka socday deegaanno dhanka Waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in tobaneeyo askari oo katirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka Axmed Madoobe lagu dilay dagaallo culus oo ka […]
Daawo Sh/Cali Wajiis oo Fatwooday In La Baado Ganacsatada Suuqa Bakaaraha.
Caqabadaha heysta ganacsatada magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha waa mid loo degay istaraatiijiyad fog oo muddo dhowr bilood ah la karkarinayay, waxaana jira dowr ama kaalin ay arrintani ku leeyihiin wadaadaha u fatwooda DF iyo Amisom. Sheekh Cali Maxamuud Xassan (wajiis) oo kamid ah hey’adda culimada ee ay dowladdu […]
Col. Rufle: Sh/ Umal Shalay Wuxuu Nagu Xakumay Riddo Haddana Kismaayo oo Itoobiyaan Heysto Ayuu Guryo Sharci Darro Ah Ka Dhisanayaa” (Dhageyso)
Col. Aadan Rufle oo kamid ah saraakiisha dowladda federalka ah ee Gedo ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaalooyinka ay joogaan ay yihiin kuwa qaba dhibaatooyin badan. Ciidamada Itoobiya iyo Kuwa Kenya ayuu ku eedeeyay iney hab gumeysi ah ula dhaqmaan bulshada isagoo tusaale usoo qaatay qof haweeney ah oo […]
Degdeg: Axmad Diiriye Cali oo Geeriyooday.
Axmad Diiriye Cali oo kamid ahaa odayaasha taageera DF iyo ciidamada shisheeye ayaa habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Axmad Diiriye ayaa ku geeriyooday isbitalka Digfeer oo uu muddo 17 maalmood ah ku xanuunsanayay sida uu saxaafadda u sheegay wiil uu isagu dhalay. Maanta ayaa lagu wadaa […]